सिड्नीमा जात्रै जात्रा : दर्शकलाई पुग्यो सन्तुष्टिको मात्रा – Nepali Digital Newspaper
सिनेमाको मूल निचोड के हो ? यसको गन्तब्य र सिनेमाले देखाउन खोजेको कुरा के हो ? यो कुरामा निर्देशक अल्मलिनु हुँदैन । आफ्नै सृजनामा अस्पष्ट हुने फिल्मकर्मीले कसरी स्पष्ट र छर्लंग सिनेमा बनाउन सक्छ ? र, त्यस्ता मेकरहरूबाट राम्रो सिनेमाको आशा राख्नु पनि दर्शकहरूको गल्ती हो ।
सिनेमाको मूल बाटो नसमातिकन चाख्न पाइने लोभमा वा सस्तो मसला हालेर दर्शकहरूलाई झुक्याउन खोज्यो भने अब दर्शक होइनन् कि मेकर आफै झुक्कीने समय आएको छ ।
यस्तै यस्तै अल्मलाउनी र मुख्य खानाभन्दा अनावश्यक मसला हालिएका अघिल्ला केही सिनेमाहरूले प्रवासमा रहनुभएका नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुहुने दर्शकहरूको स्वाद बिगारेका थिए । नेपाली सिनेमाप्रति प्रवासमा रहनुभएका नेपाली चलचित्रप्रेमीहरूको चाख कम हुन थालेको थियो । तर शुक्रबारबाट नेपाल र अष्ट्रेलियामा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको चलचित्र जात्रै जात्राले प्रवासमा झण्डै झण्डै गुम्न लागेको नेपाली सिनेमाको गरिमा, वजन, उचाई र साखलाई बचाएको छ । ‘सिनेमा भनेको यस्तो हुनुपर्छ । हामी विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू जस्तो पनि चलचित्र हेर्छन् भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ ? के हाम्रो पैसा र समयको महत्व छैन ? जात्रै जात्रा जस्तो चलचित्र बनाउनु न हामी पटक पटक हेर्न तैयार छौँ’ सिड्नीको बरउडमा रहेको इभेन्ट सिनेमामा जात्रै जात्रा हेरेर हलबाट बाहिरिएका हाल सिड्नीमा रहेका पोखरेली कलाकार नवीन घायलको प्रतिक्रिया थियो यो ।